ပာက်ကာတွေဘယ်လိုပာက်လဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ပာက်ကာတွေဘယ်လိုပာက်လဲ
Posted by Wai Phyoe on Jan 22, 2012 in Computers & Technology, Cover Faces, Creative Writing, Education, How To.., Myanmar Gazette, News | 13 comments
ကျွန်တော့်၇ဲ့ဆ၇ာ ကိုချောကလက်ပြောသားချက်များကိုကိုးကားပြီးပြန်လည် share ပေးလိုက်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာအကြောင်း အနည်းငယ်သိရုံလောက်နဲ့ ဟက်ကာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Hacking Utility Tools တွေက အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းတွေ များကြီးရှိပေမယ့် တူရာကို စုစည်းလိုက်ရင်တော့ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတွေကိုသာ တွေ့ရှိရပါတယ်။
DDos Attacking အကြောင်းလေးသိရင်နည်းနည်းလောက်ဆွေးနွေးပေးပါအုန်း
ဟုတ်တယ် အဲဒီလိုသိနေတဲ့သူတွေကို ပိုကြောက်ရတယ် လက်တွေ့စမ်းသပ်နေမှာစိုးလို့လေ…. ဒါပေမယ့် ဒီပေါ်ကသူတွေကတော့ အဲဒီလိုသူများအကျိုးယုတ်အောင် လုပ်မယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူးလေ ဒါကြောင့်သူတို့သိထားတာတွေကို အများသိအောင်ဖြန့်ဝေပေးနေတာပေါ့
အဟတ်တော့ မခံဘူးဘူး.. ရေထဲမှ မဆင်းတာ.. ဟဲဟဲ..
ကွန်ပြူတာ နဲ့ သူများကို လက်စွမ်းတော့ မပြချင်ဘူး သဂျီး တောင်ရှည်ဂျီးနဲ့ ချွေးသုတ်အောင်တော့ လုပ်ချင်တယ်။ ဟဲဟဲ..
ဘုရား တရား သံဃာ..
အော် သူများ စိတ်ညစ်အောင် မလုပ်တော့ပါဘူး ၀ဋ်လည်မှာ စိုးလို့..
“ကွန်ပျူတာအကြောင်း အနည်းငယ်သိရုံလောက်နဲ့ ဟက်ကာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသင့်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Hacking Utility Tools တွေက အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူရရှိနိုင်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
အဲ့ဒီလောက် မလွယ်ပါဘူးဗျာ… ဒါတွေသုံးတတ်ရင် Software User အဆင့်လောက်ပဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါ… Hacking နဲ့ Abusing ကို ခွဲခြားမြင်နိုင်ပါစေ
ကျွန်တော်ကေ၇းထားတာ မြန်မာလို၇ှင်း၇ှင်းလေးပါ။ ပာက်လို့၇မှတော့ ပာက်ကာဖြစ်ပြီပေါ့ ဘာလေးကိုပဲ Hacking လုပ်နိင်ပါစေ အဲ့ဒါ ပာက်တာပဲပေါ့ဗျ။ကျွန်တော် ပာက်ကာလို့ပဲေ၇းလိုက်တာပါ။ Por Hacker လို့မေ၇းလိုက်မိဘူးထင်။ Newbie ပာက်ကာသဘောနဲ့ပဲေ၇းလိုက်တာပါ။ ကြုံ၇င် Hacking Software လေးဒေါင်းလို့၇အောင်တင်လိုက်ပါအုံးမယ်။ ဘယ်လောက် မွှေလဲဆိုတာကိုတော့ အဲ့ဒီကြမှပဲ
စမ်းကြည့်ကျပါတော့။ Black hacker,white hacker, brown hacker ဆိုပြီး Hacker သုံးမျိုး၇ှိတာ
လူတိုင်းသိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမှ Pro နဲ့ Newbie ဆိုပြီး ၂မျိုးထပ်ခွဲတာကို hacking နဲ့ abusing ခွဲခြားမမြင်နိင်ခင် မြင်နိင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကလည်း ပြန်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကို TTCG ပြောတာကိုထောက်ခံပါတယ်။Hacking ပိုင်းကထင်သလောက်
မလွယ်ပါဝူး။ Mini Windows(Hiren’s boot )ကနေ Hacking Tools
လေးတွေသုံးကြည့်တယ်။အဆင်မပြေပါဝူး။Hacking ပိုင်းက ၄ ၅ နှစ်လောက်
စိုက်လိုက်မတ်တတ်ကြိုးစားတာတောင်မှ Hacker တစ်ယောက်ဖြစ်ပီလို.
ကပ်ပတိန်ဂျီး နဲ့ တီတီစီဂျီ ပြောတာ အမှန်ဘဲ ဗျို့ 
မလွယ်လောက်ဘူး ဝေဖြိုးရေ။ထင်သလောက်သာ လွယ်ရာ ဟက်ကာချည်းဘဲဖြစ်နေတော့မှာပေါ့။
ကိုသူရဿဝါပြောသလို“အစ်ကိုရေ အကိုက ဟက်ရအောင်ခွေးလား”တဲ့ဗျား။
ဒါဆို ကွန်ပျူတာနည်းနည်းသိတာနဲ့ အကုန်ဟတ်ကာကြီးတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီး ဒေတာတွေ မေးလ်တွေ အကုန်ပေါက်ကုန်ပြီပေါ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်… အများအားဖြင့်က သူများ မကောင်းကြံချင်လို့ လေ့လာကြတာ ပိုများတယ် ထင်တာပါပဲ။
“ကွန်ပျူတာအကြောင်း အနည်းငယ်သိရုံလောက်နဲ့ ဟက်ကာတစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ေ
..ကန့်ကွက်ပါတယ် .. ကွန်ပျူတာအကြောင်း အနည်းငယ်သိရုံနဲ့ ဘာမှသုံးစားလို့မရဘူး ..အဖွင့်အပိတ်ဘဲရမယ် …. အဲလူတစ်ယောက်ကို Linux က Program တစ်ခု Install လုပ်ခိုင်းမယ် ..ဒါမှမဟုတ် Microsoft က Program တစ်ခု crack ဖြေခိုင်းမယ် … ကိုင်း တတ်မလား ??
တတ်တယ်ဆိုရင်ပြောနော် စမ်းရအောင် ။။။
“အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ says:
ကိုသူရဿဝါပြောသလို“အစ်ကိုရေ အကိုက ဟက်ရအောင်ခွေးလား”တဲ့ဗျား။ ”
အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ ခင်ဗျား… ခင်ဗျားလည်း လိုက်ပြီး မီးမွှေးနေတာ များနေပြီ …အတိုက်ခံရတာ ခင်ဗျားစံနက်တွေ အများကြီးပါတယ် .. အဲမဟုတ်ဘူး …ခင်ဗျား စနက်တစ်ခုတည်းကြောင့် မြန်မာ အချင်းချင်း အတိုက်ခံရတာ .. တော်တော် မွှေတဲ့လူ